काठमाडौँ आएको पहिलो दिनमै डरलाग्दो करेन्ट लग्यो _काम गर्न आएका कृष्णको जिन्दगीनै सिद्दियो !!! (भिडियो सहित हे*’र्नुहोस ) – My Blog
काठमाडौँ आएको पहिलो दिनमै डरलाग्दो करेन्ट लग्यो _काम गर्न आएका कृष्णको जिन्दगीनै सिद्दियो !!! (भिडियो सहित हे*’र्नुहोस )
No Comments on काठमाडौँ आएको पहिलो दिनमै डरलाग्दो करेन्ट लग्यो _काम गर्न आएका कृष्णको जिन्दगीनै सिद्दियो !!! (भिडियो सहित हे*’र्नुहोस )
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोलाबिना अ’प्रेशन मृ’गौलाको प’त्थरी बाहिर निकाल्न सहयोग गर्छन् यी घ’रेलु उपा’य मृगौला मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । मृगौलाको काम शरीरमा पानीको स्तर र अन्य तरल पदार्थ, केमिकल स्तर सही राख्नु र हानिककारक पदार्थ बाहिर निकाल्नु हो ।
हामीले जे खान्छौँ, त्यसले हाम्रो शरीरमा शक्ति प्रदान गर्छ। खानाबाट पाइने पोषक तत्वलाई शरीरको रगतसम्म पुर्याउने काम पनि मृगौलाले गर्ने गर्छ । तर कहिलेकाही गलत खानपानका कारण मृगौलालाई समस्या पुग्छ र मृगौला सम्बन्धी विभिन्न समस्या पैदा हुने गर्छन् ।मृगौलाको पत्थरी पनि एक समस्या हो । कयौँ व्यक्तिको त यो पत्थरी निकाल्नका लागि शल्यक्रिया समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी तपाईलाई केही घरेलु उपायका बारेमा जानकारी
दिदैछौँ, जसले किड्नीको पत्थरी निकाल्नमा सहयोग गर्ने गर्छ ।आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती उपाय ? प्रसस्त मात्रामा पानी : मानव शरीरमा ७० प्रतिशत पानी छ। पानीको कमीले शरीरमा विभिन्न किसिमको नोक्सान पुग्न सक्छ। कुनै पनि सामान्य व्यक्तिले दिनमा करिब २ देखि ३ लिटर पानी पिउन आवश्यक छ ।
तपाईले जति पानी पिउनुहुन्छ। पिसावबाट तपाईको शरीरमा उतिधेरै विकार पदार्थ बाहिर निस्किन्छन्। मृगौलामा पत्थरीको समस्या छ भने पनि तपाईले धेरै पानी पिएर त्यसलाई बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने गर्छ ।जैतुनको तेल र कागतीको रसः यदी तपाई मृगौलाको पत्थरीको समस्या बिना शल्यक्रिया बाहिर निकाल्न चाहनुहुन्छ भने जैतुनको तेल र कागतीको रस पनि एक अचुक घरेलु उपचार बन्ने गर्छ। तपाईले जैतुनको तेलमा कागतीको रस राखेर हरेक दिन
← पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन, असार १ गते मंगलबार, असरको पहिलो दिनको राशिफलमा हेर्नुहोस तपाईको भाग्य कस्तो छ ? → हे भगवान् ! २१ बर्षिय चेलिलाई यो कस्तो रो ग लाग्यो ,मलाई बचाउनुहोस् म बाच्न चाहान्छु (हेर्नुस् भिडियो )